Fiandohana vaovao sy dia vaovao ho an'ny Meflle Bearings amin'ny taona 2020
Taona 2020 dia ho tratry ny fiambenana ny olona. Virosy satro-boninahitra vaovao no namely an'izao tontolo izao, ary ny olona manerantany dia tototry ny tahotra, ny tsy fahampian'ny famatsiana, ary ny fitomboan'ny tsy fananan'asa tampoka amin'ny firenena maro. Ao anatin'ny toe-java-misy eto amin'ity tontolo ratsy ity, ny mpitarika ny Yandian T ...
Toy izany koa namboarina toy ny baolina bearings, bearings roller manana fifandraisana an-tsipika fa tsy point contact, ahafahan'izy ireo manana fahaiza-manao lehibe kokoa sy fanoherana ny hatairana ambony. Ny roller dia avy amin'ny endriny maro, izany hoe silindrano, boribory, tapered ary fanjaitra. Cylindrical roller bearings dia mitantana ny ...
Ny mitondra baolina mahazatra dia misy lala-mitafo anatiny sy ivelany, singa boribory maromaro nosarahan'ny mpitatitra, ary matetika, ampinga sy / na tombo-kase natao hitazomana ny loto hivoaka sy hametaka. Rehefa apetraka dia matetika voatsindry kely ilay hazakazaka anatiny tsatokazo sy ny hazakazaka ivelany atao amin'ny trano. ...